@minsoenaing - Steem - GoldVoice.club
ပညာတတျတာမတတျတာ အတုဆိုတာရှိပါ့မလားဗြာ။ တတျရငျတတျတယျ မတတျရငျမတတျဘူးပဲမို့လား။ မဟုတျဘူး။ပညာတတျအတုဆိုတာရှိခဲ့တယျ။ ကြှနျတျောကသူ့ကိုပွုစုပြိုးထောငျပေးခဲ့တာပါ။ သူ့အတနျးက ဒုတိယတနျးပဲရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ လူတောတိုးနိုငျတဲ့အသိတှရှေိလာအောငျ ကြှနျတျောက နှစ…
Steemit' and I
My real name is Soe Min. When you write, you use the name Min Soe Naing. I've been writing for Steemit for about four years. At the beginning of the fourth year, the Steem Dollar price went up and we thought that we wereamaster at Steemit. Fewer writers…
မွနျမာတှလှေတျလပျရေးရခဲ့ပွီဆိုသညျ့တိုငျ လှတျလပျရေးနသေ့ညျ မလှတျမလပျကငျြးပနရေဆဲဖွဈသညျ။ အထူးသဖွငျ့နပွေညျတျောတှငျကငျြးပသညျ့ လှတျလပျရေးပှဲသညျ ပို၍မလှတျလပျပါ။ လူတှအေားလုံးလညျးမပါဝငျရပါ။ ဝနျးထမျးမြားဖွငျ့သာကငျြးပသညျ။ မလိုကျမနရေ လူဦးရသေတျမှတျထားပွီး ထိုငျခုံအပွည့…
မိမိကိုယျကိုယျ စာရေးသူဟုခံယူထားလြှငျ စာမရေးရမနနေိုငျကွပါ။ သို့သျော စာရေးအလှနျဝါသနာပါသူ ကြှနျတျောသညျ စာတဈပုဒျမဆိုထားနှငျ့ စာတဈပိုဒျပငျလြှငျရေးလိုသောဆန်ဒ မရှိတော့သဖွငျ့ စာမရေးခဲ့သညျမှာကွာလပွေီ။ ကွာလြှငျ ပကျြသှားတော့မညျထငျခဲ့သော steemit' myanmar သညျ ၂ ဦးစ၊…
"လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ချိန်ချိန်မှာမိဘမဲ့ဖြစ်ရမှာ ချည့်ပဲ စောစောမိဘမဲ့နဲ့ နောက်မှဖြစ်တဲ့မိဘမဲ့ပဲ ကွာတယ်” လို့ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခဝတ္တုတစ်ပုဒ်မှာ ဖတ်ခဲ့ရဖူးပြီး သြော်ဟုတ်ပါလားလို့ သိမှတ်ခဲ့ဖူး ပါတယ်။
သို့သော်လည်း စောစောမိဘမဲ့ဆိုတာက လုပ်ကိုင် မစားတတ်သေးတဲ့ ကလေးဘဝမှာ မိဘမဲ့သွားတာ မျိုးဖြစ်တော့ ဘဝရပ်တည်ဖို့အရမ်းခက်ခဲသွားတာ ပါ။ ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ယုံမက သားသမီး မြေးမြစ်တွေတောင်ကိုယ့်ကိုမှီခိုနေနိုင်တဲ့အချိန်အ ခါမျိုးမှာ မိဘမဲ့သွားတာကတော့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်သ…
ဆန်ဈေးတွေတက်လို့ကြားရလျှင် လယ်သမားတွေ တော့ အဆင်ပြေကြပြီဟု ယူဆစရာရှိသည်။ သေ သေချာချာလေ့လာကြည့်တော့ လယ်သမားတွေ မှာမပြေလည်ရှာကြ။တစ်နှစ် တစ်နှစ် စိုက်ပျိုးစ ရိတ်ချေးငွေတွေဖြင့်သာ လုံးလည်လိုက် နေကြရှာ သည်။ ဆန်ဈေးတက်တာ လယ်သမားနှင့်သိပ်မ ဆိုင်လှပဲ…
မြန်မာတို့သည် နည်းပညာကိုလေ့လာလိုက်Raduationစားမှု များလာသော်လည်း ကိုယ်ပိုင်တီထွင်မှုမပြုလုပ် နိုင်ကြသေးပါ။ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်မှုပြုလုပ်လာနိုင် မည်ဆိုလျှင်လည်း ဒီနေ့လိုယှဉ်ပြိုင်မှုများသော ခေတ်ကြီးတွင် ဥပမာ Mobile Phone တွေထုတ်လ…
Announcing the eSteem Token: ESTM
View this post on Hive: Announcing the eSteem Token: ESTM
ဘယ်အရာမဆိုပေါ့နော် တန်ဘိုးကိုယ်စီရှိပါတယ်။ တစ်နေရာရာမှာ သုံးစားလို့မရဘူးဆိုတဲ့သူတောင် နေရာတစ်ခုမှာတော့အသုံးဝင်တတ်လေ့ရှိပါတယ်။ခွန်အားဗလသာရှိတာ ဦးနှောက်ကမရှိဘူး ဆိုရင် လည်း အဲဒီလိုလူမျိုးသာလိုအပ်တဲ့ နေရာဆိုတာ ရှိပါတယ်။ နေရာလွဲနေရင်တော့…
ခုခေတ်မှာ လူတွေတီထွင်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေ ဟာများပြားလွန်းလာပြီး အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး ကောက်ယူလို့လည်းရလာပါတယ်။ ဒါဟာတစ် ဖက်မှာစကားလုံးကြွယ်ဝမှုဆိုပြီးအကောင်းမြင် နိုင်သလို အငြင်းပွားစရာများလာတဲ့အတွက် အန္တရာယ်လည်းရှိလာပါတယ်။ အ…
ငယ်ငယ်က အမြဲတမ်း အမေဆိုနေတတ်တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ အဲဒီသီချင်းကို အမေရယ်ပုခက်လွဲရင်းလည်းဆိုတယ်။ ထမင်းချက်ရင်းလည်းဆိုတယ်။...
အရမ်းစားကောင်းတယ်။ ပြည်မှာရတဲ့ ထမင်းသုပ်နဲ့ တခြားမှာတွေတဲ့ ပြည်ထမင်းသုပ်ကအရသာမတူဘူး။ ပြည်ရောက်ရင်မနေနိုင်ဘူး သွားကိုစားပစ်တာ လကမ္ဘာလက္ဘက်ရည်မှာ ရတယ်။ ရတဲ့နေရာများပါတယ်။ ပြည်သားတွေကတော့ ဘယ်မြ်ို့
My Actifit Report Card: July72019
I hadagreat time walking and running along the coast today. I met some friends and hadachat.. I did4km in total and Iafeel my fitness level is improving. Tomorrow I hope increase my distance.
My Actifit Report Card: July62019
I hadagreat time walking and running along the coast today. I met some friends and hadachat.. I did5km in total and Iafeel my fitness level is improving. Tomorrow I hope increase my distance.
5336 Running, Walking
အသိပညာဗဟုသုတတွေ ရှာတာ ကောင်း ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အမှား အမှန် တောင်ခွဲခြား မသိဘူးဆိုရင် ဗဟုသုတလည်း အဆိပ်လိုပဲ၊ ၊ ကိုယ်လိုရာဆွဲတွေးနေတာကိုး ။ ဘယ်လိုဗဟု သုတတွေပဲရှိရှိ ကိုယ့်စိတ်ကိုအမှန်ကိုသိချင်တဲ့ စိတ်ကိုအခြေခံပြီးထားမှ အမှန်သိ မှာ မကေ…
ဗုဒ္ဓနည်းဖြင့် အောင်မြင်ရေးနည်း ၄ နည်း
ဗုဒ္ဓနည်းဖြင့်အောင်မြင်ရေး ၄ နည်း